Nagarik Shukrabar - सन्किइन् कट्रिना
सोमबार, ०४ कार्तिक २०७६, ०६ : ५३
बिहिबार, ०६ जेठ २०७३, ०३ : १४
बलिउड अभिनेत्री कट्रिना कैफ हिजोआज सनक्क सन्किन थालेकी छिन् । अभिनेता रणवीर कपुरसँगको ‘ब्रेकअप’पछि उनले खास गरी सञ्चारकर्मीसमक्ष रिस पोख्ने गरेकी छिन् ।
ब्रेकअपलगत्तै यसबारे प्रश्न सोध्दा उनले उल्टै प्रश्न गरेकी थिइन्, ‘कोसँग मेरो अफेयर चलेको थियो भन्ने तपाईंलाई के थाहा ? के मैले कहिल्यै रणवीरसँग अफेयर चलेको थियो भनेँ ? अफेयर चल्दै नचलेको व्यक्तिसँग ब्रेकअप किन गर्नुभयो भनी सोध्ने यो कस्तो चाला हो ?’
यसैबीच कट्रिनासवार कारले गत साता एकजना फोटोपत्रकारको खुट्टा किचिदिएको थियो । कट्रिनाको फोटो खिच्न ठिक्क परेका एक फोटोपत्रकारलाई उनीसवार कारले किचिदिएको हो । कट्रिनाकै इसारामा उनका ड्राइभरले फोटोपत्रकारको खुट्टा किचिदिएको हुनसक्ने बताइएको छ । केही समयअघि उनले आफ्नो पिछा गर्ने फोटोपत्रकारलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइदिने चेतावनी दिएकी थिइन् ।
टेलिसिरियल तितो सत्यहुँदै ठुलो पर्दाको फिल्म बनाउन थालेका दीपकराजका फिल्म व्यापारीक रुपमा सफल भए पनि गुुणस्तरको रुपमा कच्चा देखिएको कतै त्यही गाँजाकै कमाल त हैन ?
भ्यालान्टिनो रन वेमा उत्रिइन् १८ वर्षीया मोडल काया गेरब। उनी स्प्रिङ समर कलेक्सन–२०२० का लागि रनवेमा उत्रिएकी थिइन्। उनी अल्ट्रा सेक्सी ब्लाउज लगाएर रनवेमा आएकी थिइन्।
अमेरिकी गायिका हल्सी गायनमा जति सचेत देखिन्छन्, ड्रेस सेन्समा पनि उत्तिकै सचेत देखिन्छिन्। जब उनी कुनै रेड कार्पेटमा उत्रन्छिन् युनिक र इपिक ड्रेसले त्यहाँ रहेका सबैको ध्यान खिँचिहाल्छ।